चर्चित गायक प्रमोद खरेललाई के भयो यस्तो ? – Gazabkonews
चर्चित गायक प्रमोद खरेललाई के भयो यस्तो ? स्टेजमा गाउँदा गाउँदै के भयो प्रमोदलाई ? किन प्रमोदले गाउँदा गाउँदै यस्तो अवस्थामा पुर्यायो आयोजकले ?
डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कम्पनी विश्लेषण यस साता लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक ७.७२ प्रतिशत बढेको छ। गत साता ५२११.९८ विन्दुमा बन्द भएको यस उपसमूहको परिसूचक यस साता ४०२.३२ अंक बढेर ५६१४.३० विन्दुमा बन्द भएको छ।
यसै उपसमूहका कम्पनीहरुमध्ये एक कम्पनी हो डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (DDBL)। यस लघुवित्तको शेयरमूल्य यस साता १२८ रुपैयाँ बढेको छ। गत साता १ हजार २०६ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको यस लघुवित्तको शेयरमूल्य यस साता बढेर १ हजार ३३४ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ।
यस अनुसार आगामी साता यस लघुवित्तको शेयरमूल्य उकालो लागेमा १ हजार ५०० रुपैयाँमा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ। त्यसैगरी, ओरालो लागेमा भने १ हजार २०० रुपैयाँमा टेवा पाउने देखिन्छ। यस साता कम्पनीको ५ दिने इएमए २० दिने इएमएभन्दा माथि रहेको छ। यसका साथै यी दुई बीचको दूरी बढ्दै गएको छ।
यसले लघुवित्तको शेयरमा बाइङ्ग मोमेन्टम बलियो रहेको संकेत गर्दछ। साताको अन्तिम कारोबार दिन लघुवित्तको शेयरमूल्यले हरियो मारुबोजु मैनबत्ती बनाएको छ। यसले सो दिन लघुवित्तको शेयरमा बिक्रीकर्ता माथि खरिदकर्ता हाबी रहेको संकेत गर्दछ।
नेप्सेसँगै यस साता लघुवित्तको भोल्यूम पनि बढेको छ। यस साता लघुवित्तको दैनिक औषतमा ३२ हजार १०८ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। लघुवित्तको २० दिने औषत भोल्यूम १७ हजार ५६६ कित्ता रहेको छ। लघुवित्तको २० दिने औषत भोल्यूमको तुलनामा दैनिक औषत भोल्यूम ८२.७८ प्रतिशत बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्तले १७ करोड ३५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.३७ प्रतिशत घटेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा लघुवित्तले १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा लघुवित्तले उल्लेख्य खराब कर्जा उठाएका कारण नाफा बढेको थियो। यद्यपि, सो अवधिमा लघुवित्तको सञ्चालन मुनाफा भने ऋणात्मक रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १.२० प्रतिशत घटेको छ भने सञ्चालन मुनाफा १ अर्ब १० करोड ९१ लाख ऋणात्मकबाट २३ करोड २ लाख धनात्मक भएको छ। सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा कम रकम छुट्याएका कारण लघुवित्तको सञ्चालन मुनाफा धनात्मक बन्न पुगेको हो।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ३८ प्रतिशत बढेको छ भने जगेडा कोष ११.८० प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, लघुवित्तको सापटी २४.१७ प्रतिशत र निक्षेप ३१.३७ प्रतिशत बढेको छ भने कर्जा २७.८६ प्रतिशत बढेको छ।
नाफासँगै लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी ७८ रुपैयाँ ८१ पैसाबाट २८ रुपैयाँ ७७ पैसा घटेर ५० रुपैयाँ ४ पैसामा झरेको छ। असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्तको बुकभ्यालु १८७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ।
गत साताको अन्तिम कारोबार मूल्यका आधारमा लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात २६.६६ गुणा रहेको छ। त्यसैगरी, लघुवित्तको १४ दिने आरएसआई ७०.५० स्केल अर्थात ओभरबट जोनमा रहेको छ। यसले बजारमा शेयर खरिदचापको तुलनामा बिक्रीचाप बढी रहेको संकेत गर्दछ। प्राविधिक विश्लेषणका अधिकांश उपकरणहरुमा लघुवित्तको शेयरमूल्य बुलिश देखिन्छ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा हाल लघुवित्तको १ करोड ३८ लाख ७४ हजार ९८३.३० कित्ता शेयर सूचीकृत छ। लघुवित्तको १८० दिने औषत मूल्य १ हजार ४४८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ। त्यसैगरी, लघुवित्तको ५२ हप्ताको उच्च मूल्य २ हजार ४२० रुपैयाँ रहेको
छ भने न्यून मूल्य १ हजार १९ रुपैयाँ रहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार मूल्यका आधारमा लघुवित्तको कुल बजार पूँजीकरण १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख २७ हजार ७२२ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। फियर एण्ड ग्रीड मिटरमा लघुवित्तको शेयर अहिले न्यूट्रल जोनमा रहेको छ। गत साता लघुवित्तको शेयर फियर जोनमा रहेको थियो। यसले लगानीकर्ताहरु विस्तारै लघुवित्तको शेयर खरिद गर्न थालेको संकेत गर्दछ।